အားလုးံအတြက္​ — Steemkr
goldbloger40 in artzone
"? ဘီလ်ဂိတ်: Hans ကမ္ဘာတွင်ထူးခြားပြောင်မြောက်တိုးတက်မှုအောင်ခံခဲ့ရသည်ဟုယုံကြည်လျှင်, သူကအကြောင်းသိရန်လူတိုင်းချင်တယ်။ တကယ်တော့လူတွေကအမှုအရာပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ကြောင်းရှိရာဒေသများဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တိုးတက်မှုပြန့်နှံ့ကူညီရန်သူ၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသည်။ လူတွေတိုးတက်မှုရိပ်မိသည်ဤမျှခက်ခဲမယ့်အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါကိုဖတ်ပါတယ်အခြားနီးပါးဘာမှထက်ကရှင်းပြသည်။ သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်ဘက်လိုက်မှုကိုကျော်လွှားပြီးပို factfully ကမ္ဘာကြီးကိုကြည့်ရှုဖို့ဘယ်လိုအဘို့ရှင်းလင်းစွာ, Actions အကြံဉာဏ်ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီအစဉ်အမြဲငါကိုဖတ်ပါတယ်အရှိဆုံးပညာပေးစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ငါလူတိုင်းကိုပညာရှင် Hans
'' ထိုးထွင်းသိမြင်ရာမှအကြိုးပွုနိုငျထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကိုတကယ်လူတွေထင်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှုန်းမှာတိုးတက်စေလျှင်, အဘယ်ကြောင့်လူတွေအကြောင်းကိုမမှန်ကန်ကြောင်းအယူအဆတွေရှိမရှိအရေးပါသနည်း? သငျသညျအကြှနျုပျတို့ပြီးသားလာပါတယ်မည်မျှသိလျှင်ဒါဟာတိုးတက်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူပါတယ်။ သငျသညျကမ်ဘာတိုးတက်လျက်ရှိသည်မယုံလျှင်, သင်တစ်ဦးအဖြစ်ဆိုးကိုကြည့်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိနေနှင့်ဘာမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော်တိုးတက်မှုဖြစ်နိုင်မည်မျှသိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးမကောင်းတဲ့အခွအေနကိုကြည့်ခြင်းနှင့်, ပြောနိုင်ပါတယ် "ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျဤပိုကောင်းစေနိုင်သနည်း" ပညာရှင် Hans ဒီကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းကိုဖော်ပြရန်စုံလင်သောလမ်းဖြစ်သည့်တစ်ဦး "possibilist," မိမိကိုမိမိဖုန်းခေါ်ကြိုက်တယ်။ သူကသူတို့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်မဟုတ်ကြောင်း, အမှုအရာပိုကောင်းရနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ကြ၏။ ပညာရှင် Hans နှင့်တူတစ်ဦးက possibilist တိုးတက်မှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းပါဘူး - သူတိုးတက်မှုဖြစ်ပျက်နေသည်ရှိရာဒေသများအဘို့အကြည့်များနှင့်အခြားသောနေရာများ၌ပွားဖို့လမ်းကိုရှာ။
အဆိုးမြင်စိတ်တွေဆီသို့တစ်ဗီဇနဲ့တူ, ဒါမှမဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်မျက်နှာသို့တဦးတည်း - Rosling တစ်ဆယ်ကမ္ဘာကြီးကိုပေါ်မှာငါတို့ရှုထောင့်ဖျက်သည်ဟုဗီဇအတိုင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ 10 ၏ဘယ်သင်တို့သည်ငါတို့၏အနာဂတ်နှင့်အဘယ်ကြောင့်အဘို့ကိုရည်မှတ်အများဆုံးရှာရမလဲ? အဆိုပါသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်မဟုတ်ပေမယ့်ငါအပြစ်တင်ဗီဇစိတ်ပူမိပါတယ်။ တစ်ခုခုဖြစ်ပျက်သောအခါ, တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဘို့အကြည့်ဖို့လူ့သဘောသဘာဝပါပဲ။ လူတိုင်းကိုဓားစာခံကိုအတူပြဿနာကိုသိတယ်။ သို့သော်သူရဲကောင်းများသို့လူတွေကိုလှည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇလည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုအတားအဆီးဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူအမှုအရာကြောင့်အသူရဲကောင်းများ၏ပိုကောင်းမရကြဘူး။ အဲဒီမှာသူရဲကောင်းများ 1000 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ရှိ. , ကမ္ဘာကြီးကိုရွားလှဖြစ်ခဲ့သည်။ ခေတ်မီစနစ်များအံ့ဖွယ်ပါပဲ။ ယောန Salk တစ်ခုအံ့သြဖွယ်သိပ္ပံပညာရှင်ခဲ့ပေမယ့်သူကကျွန်တော်ပိုလီယိုချေမှုန်း၏အိမ်တံခါးပေါ်မှာဆိုရင်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါဘူး -